उमेर पुगे पनि बालबालिकाले ओछ्यानमा पिसाब गर्ने बानी छ? मिर्गौला रोग हुनसक्छ
सामान्यतया बालबालिका तीन–चार वर्षको हुँदा ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने समस्या रोकिने गर्छ । तर कुनै बच्चा ८–१० वर्षसम्म पनि ओछ्यानमा पिसाब गर्छ भने त्यो समस्या हो । यसलाई ‘एनोरोसिस’ भनिन्छ।
आम मानिसमा उमेर बढ्दै गएपछि यो समस्या ठिक हुन्छ भन्ने सोच छ । तर, नियन्त्रण भएन भने त्यसले भित्र मिर्गौला बिगार्ने खतरा हुन्छ भन्ने धेरैलाई पत्तो छैन । उमेर पुगिसकेका बालबालिकाहरुमा ओछ्यानमा पिसाब गर्ने बानी छ भने त्यो मिर्गौलाको समस्या हुन सक्छ । यस्तो समस्या सामान्य संक्रमण, पिसाब थैलीमा समस्या, कब्जियतजस्ता कारणले निम्तिएको हुन सक्छ। पहिला त्यसलाई पहिचान गरेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमा उपचार गरिएन भने यो समस्या भएका धेरै बच्चाको पछि मिर्गौला फेल हुने खतरा रहन्छ । साथै बच्चालाई मानसिक समस्या पनि थपिन सक्छ।
मिर्गौला रोग भन्ने बित्तिकै आमरुपमा युवा तथा वृद्धवृद्धालाई मात्र लाग्ने रोग भनेर बुझ्ने गरिन्छ । तर, कलिला बालबालिकालाई पनि मिर्गौलाका धेरै रोगले सताएको हुन्छ । कलिलै उमेरमा मिर्गौला फेल भएर कति बालबालिकाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । सामान्य समस्यालाई समयमा नै उपचार नगर्दा मिर्गौलाका जटिल समस्या भोग्ने बालबालिका धेरै छन्।
मिर्गौलाको रोग भनेको ‘साइलेन्ट’ रोग हो । यसका लक्षण हत्तपत्त देखिँदैन । तर, जब देखिन्छ त्यो बेला ढिला भइसकेको हुन सक्छ । बालबालिकाहरुमा पटक–पटक पिसाबको संक्रमण देखिन्छ भने त्यो मिर्गौलाको समस्या हो भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसको समयमै उचित उपचार गराउनुपर्ने हुन्छ । बच्चामा पिसाबको संक्रमण विभिन्न कारण ले हुन सक्छ । सामान्यतया बालिकाको तुलनामा बालकलाई पिसाबको संक्रमण कम हुन्छ । तर, बालकमा पिसाबको संक्रमण देखियो भने त्यसले मिर्गौलामा समस्या निम्त्याएको हुन सक्छ।
बालकहरुलाई मिर्गौलाको बनावटमा फरक, पिसाब थैली, पिसाब नलीमा समस्या, पिसाब फर्ने बाटोका छाला पूरा नफर्किंदा, कब्जियत तथा लामो समयसम्म पिसाब रोक्ने बानीका कारण संक्रमण देखिन्छ । यस्ता समस्या देखिए तुरुन्तै उपचारमा जानुपर्छ।
यस्तै, बालिकाहरुमा भने मुत्रद्वार र गुद्वारको सरसफाइ नहुँदा संक्रमण हुने गर्छ । बालिकाहरुलाई अभिभावकले पानीले दिसा सफा गर्दा पछाडिबाट अगाडि हात ल्याएर धुनु हुँदैन । यसो गर्दा पिसाबको संक्रमण हुने खतरा रहन्छ । यसका साथै मिर्गौलाको बनावट, पिसाब नली, पिसाब थैलीको समस्याले पनि बालिकाहरुमा संक्रमण देखिन्छ।
बालबालिकामा पिसाबको संक्रमण पटक–पटक देखिए पनि एन्टिबायोटिक वा अन्य सामान्य उपचार गरेर क्षणिक रुपमा निको पार्ने गरिन्छ । तर, उक्त संक्रमण किन दोहोरिरहेको छ ? भनेर थप जाँच गरिँदैन । फलस्वरुप कालान्तरमा त्यसले मिर्गौलामा गम्भीर असर गर्ने खतरा रहन्छ । यस्ता समस्यालाई सामान्य ठानेर चुप लागेर बस्नु भनेको हाम्रा नानीबाबुहरुलाई मिर्गौला रोगको गम्भीर अवस्थामा धकेल्नु हो ।